Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin receives Australian Ambassador – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin receives Australian Ambassador
U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation received H.E. Ms. Andrea Faulkner, Australian Ambassador to Myanmar on 20th February 2019 at 15:20 hrs at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw.
During the meeting, they exchanged views on the matters pertaining to bilateral relations and cooperation between two countries, Australia’s continued support for Myanmar’s democratization process, potential areas of bilateral cooperation such as education, eradication of narcotic drugs and prevention of human trafficking.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea Faulkner အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်၊ ၁၅၂၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအပေါ် သြစတြေးလျနိုင်ငံက ဆက်လက်ထောက်ခံကူညီသွားမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ပညာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်နှိမ်နှင်းရေး၊ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး စသည့်ကဏ္ဍများတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာများ စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။